Nosy Mariana Avaratra - Fanaraha-maso ny hamafin'ny haran-dranomasina | Fiaretana haran-dranomasina
Nosy Mariana Avaratra - Fanaraha-maso ny fiaretan'ny haran-dranomasina
Valin'ny fanadihadiana momba ny harena an-kibon'ny tany amin'ny fiovan'ny toetrandro ao Saipan, Commonwealth avy amin'ny nosy Mariana Avaratra
Saipan, Commonwealth an'ny Nosy Mariana Avaratra (CNMI)
Ny haran-dranomasina manerantany dia atahoran'ny fampihenana ny fahasahiranana manerantany sy eo an-toerana. Ao amin'ny Commonwealth any amin'ny Nosy Mariana Avaratra (CNMI) dia miara-miasa ny tompon'andraikitra mba hamahana ireo fandrahonana ireo ary hanombatombana ny fisian'ny vatohara. Ny fahafantarana ny tranonkala manana hery amam-pahazavana avo lenta dia afaka mampahafantatra ireo karazana fanapahan-kevitra momba ny fitantanana hanohana sy hitazonana ny hery voajanahary haran-dranomasina. Betsaka ireo miasa amin'ny famolavola frameworks ahafahana mampivaha ny vatohara sy oharina amin'ireo tranonkala. Tato anatin'ny volana talohan'ity asa ity, dia nisy andiany iray navoaka izay manondro ny variana 11 (na 'indraikitra indrafitra') mba hanombantombana ny tanjaky ny haben'ny vatohara. Ireto ny: fahasamihafana ny haran-dranomasina, ny fanoherana ny fandehanana, ny fitrandrahana, ny biomisma voajanahary, ny saron'ny macroalgae, ny fiovaovan'ny mari-pahaizana, ny fidiran-tsakafo, ny fampidirana, ny fanjonoana, ny haran-dranomasina, ary ny fiantraikany anthropogen ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMcClanahan et al. 2012manokatra fisie PDF ). Ity fanadihadiana ity dia mamaritra ny fampiharana voalohany mifototra amin'ny sehatry ny McClanahan et al. (2012) rafitra ao Saipan, CNMI.
Ny endriky ny fahaverezan'ny 11 dia norezina na nozahana tamin'ny tranokalan'ny 35 manodidina ny nosy Saipan tamin'ny May sy Jona an'ny 2012. Ny antsipiriany momba ny fomba fampiasana dia azo jerena Eto. Mba hanombanana ny isam-pianakaviana, dia nampiasaina ity fomba manaraka ity. Ny sandan'ny famantarana tsirairay isaky ny tranokala dia nozaraina ho isan-jato raha oharina amin'ny lanja lehibe indrindra ho an'ity endri-javatra ity eo amin'ny toerana rehetra. Ity fanao ity dia antsoina hoe 'fanoratana' ary manitsy ny angon-drakitra ho amin'ny ambaran'ny standard 0-1 (ny isan-jaton'ny olona dia aseho amin'ny isam-bolana). Ny isa voatanisa dia ny salan'isa ho an'ny indostrian'ny 9 tafiditra ao amin'ny fanadihadiana (ireo fari-pahaiza-mamaritra ny haran-dranomasina minus ary ny fiantraikany ara-batana amin'ny anthropogene, izay tsy notandremana), ary ireo toerana ireo dia ambony noho ny ambony indrindra kaominina. Ny sokajim-pifandraisana avo lenta, ambany sy ambany dia nampiasaina mba hamaritana ny vokatra ho an'ny fampahalalana rehetra sy ny vokatra azo avy amin'ny faharetana.
Ny tranonkala 23 dia hita fa manana ny faharetan'ny havanao; Ny tranonkala 9 dia manana media, ary ny 3 dia ambany (jereo ny Table 1 etsy ambany). Ny fanadihadiana momba ny singa fototra dia nanambara fa ny ankamaroan'ny karazam-pihetseham-po dia notarihan'ny fahasamihafan'ny haran-dranomasina, ny fanamafisana ny fivalozana ary ny famaranana macroalgae. Tsy misy afa-tsy ireo tranonkala manana ny faharetana avo indrindra, raha oharina amin'ny toerana hafa nohadihadiana, manana fahasamihafana goavam-be, avo lenta avo ary ambany sarona macroalgae. Ny fahasamihafan'ny haran-dranomasina ambany, ny fanamafisana ny tsy fahampian-tsakafo, ary ny fikajan'ny makroalgae ambony na farafahakeliny dia maneho toerana ambany ambany. Ny tranobe avo lenta sy ny fampitam-baovao dia hita manerana ireo toeram-ponenana rehetra any Saipan raha toa kosa ireo tranokely ambany fananahana rehetra dia ao amin'ny lagin'ny Saipan avokoa.
Tabilao 1. isa sy laharam-pahamendrehana farany ho an'ireo toerana anaovana fanadihadiana. Ny isa misy ny zoro (amin'ny sanda faratampony) sy ny isa mahazatra (uni-directional 0-1) ho an'ny 9 miova rehetra dia aseho ankavanana. Ny isa maharesy dia ny isa antonony ho an'ny miovaova rehetra, avy eo dia miorim-paka amin'ny isa mahomby indrindra (zon'ny tsanganana amin'ny laharana). Ny mety ho hazakazaka avo lenta dia misy ny elanelana (0.8-1.0), salantsalany (0.6-0.79), ary ny ambany (<0.6).
Raha miorina amin'ny fanadihadiana mialoha, ny tetikasa tetikasa dia nanao soso-kevitra maromaro momba ny haran-dranomasina sy ny mpikaroka amoron-dranomasina miasa ao amin'ny CNMI:
Ho an'ny fitantanana fitantanana izay mitondra tombontsoa izay mety haharitra taona maro na am-polo taonany - toy ireo faritra voaaro amin'ny ranomasina - dia manoro hevitra fa ny tranonkala manana hetsika avo lenta kokoa dia mendrika hodinihina bebe kokoa. Ankoatr'izay, dia manolo-kevitra ny hampihenana ny fitaintainana atrophôtôka araka izay azony atao amin'ny toerana voamarina fa manana ny hery fara-tampony avo indrindra.
Ny habaka misy ny fahasamihafana lehibe momba ny haran-dranomasina sy ny fako makroalgae ambany dia mila mijery manokana avy amin'ny mpitantana satria ireo dia mety ho tranokalan'ny habakabaka avo.
Ny fiasa miteraka fanatsarana ny kalitaon'ny rano amin'ny vatohara dia mety hisy fiantraikany amin'ny faharetan'ny habetsaky ny tranokala maro (mifanohitra amin'ny hetsika hafa).
Ny fiarovana ny fokon-trondro voajanahary dia tena manan-danja tokoa amin'ny toerana misy fahabangan'ny vatana mangatsiaka kokoa amin'ny fivalanana.
Ireo tranonkala dia voamarika fa nifanaraka tamin'ireo fepetra manaraka: fihenam-bidy ambony, fahasamihafana lehibe momba ny vatohara, sarona makaralaka ambany, na mora kokoa noho ny fanakona vatohara, na ny marika sasany. Ireo soso-kevitra samihafa natao dia nahatonga ireo hetsiky ny harena an-kibon'ny tany ao amin'ny CNMI. Ny hetsika dia ny: fifandraisana sy ny fanentanana, fanatsarana ny drafitr'asam-pitantanana, ny fitsaboana ny kalitaon'ny rano, ary ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny mpizaha tany fizahan-tany. Ireo masoivoho miasa amin'ny alàlan'ny fikarakarana ny harena voajanahary sy ny fitantanana sy ny ezaka manodidina an'i Saipan dia tompon'andraikitra amin'ny faritra hafa ao amin'ny CNMI. Noho izany antony izany, ny ekipa tetikasa dia hanolotra ny fanadihadihana sy ny asa mba hampidirana ireo tranokely eny akaikin'i Tinian sy Rota, izay ambany noho ny fihenjanana an-dranomasina.
Ny fanangonana ny angon-drakitra rehetra takiana amin'ny fanatanterahana tomban'ezaka dia fitaovana enti-manentana ary mila olona maro karazana fahaiza-manao. Ny fampiasana ny antontan-daty efa misy dia amporisihina mafy hampihena ny vidin'ny fanombanana. Any amin'ny toerana maro misy vatohara marobe, sampana maromaro sy vondrona maro no handray soa avy amin'ny valin'ny fandalinana sy ny vokatra izay azo atao ny mifampizara vola ary tokony hotsaraina.
Ny fampidirana fikambanana maro sy fomba fijery maro dia mety hampitombo ny vidim-pidirana sy ny fitomboana, saingy mety tsy midika izany fa tsy ho vitan'ny tsirairay ny ho afa-po tanteraka amin'ny fomba farany. Ny fanombanana ny fiovaovan'ny toetr'andro amin'ny fijerena ny fitaintainan'ny anthropogene dia mety ho fifandonana manokana, noho izany dia tokony hiorina amin'ny fomba mangarahara sy ny fiaraha-miasa ireo fomba fanao farany ampiasaina amin'ny fitsangatsanganana anthropogene.
Ny famakiana ny faharetan'ny tranokala reefatra dia miteraka fampahalalana izay azo ampiasaina handraisana fanapahan-kevitra miorina amin'ny fitantanana; izany hoe fanapahan-kevitra mitarika amin'ny fikendrena na fametahana ny hetsika fitantanana mba hanohanana ny faharetan'ny haran-dranomasina voajanahary. Ny famaranana ny fanombanana dia tsy endriny samirery, ary ny fahafahana manao fitarainana dia tsy antony tokony hanatanterahana ny fanombanana. Tena zava-dehibe ny handinihana voalohany ny fomba hampiasana ny valin'ny vokatra sy ny vokatra. Lisitry ny filazam-baovao dia misy ao amin'ny Fanamafisana sy fanaraha-maso ny haran-dranomasina page. Ny fanombanana dia azo hamarinina rehefa mifanaraka amin'ny iray na maromaro amin'ireo filàna ireo.
Ny ivon-toeram-piarovana ny Coral Reef sy ny University of Guam dia nanohana ny ampahany amin'ny tetikasa toy ny nataon'ny CNMI Coral Reef Initiative, izay nahazo fanampiana avy amin'ny Fandaharan'asan'ny Coral Reef Conservation NOAA sy ny Loholona Gregorio Kilili Sablan.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNOAA Fisheries
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDiviziona CNMI momba ny tontolo iainana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoInstitut de Marine Pacific
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoUniversity of Guam
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFikambanana Coral Reef Pasifika Andrefana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCNMI Coastal Resources Management
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCNMI Fizarana ny trondro sy ny bibidia
Etazonia Ny Fanadihadiana momba ny Raharaha Fanatanjahantena momba ny Fanatanjahantena